I-talisman fish carp yi-feng shui
E-China, i-carp inesikhathi eside ihlonishwa. Kuzo zonke izigqoko zaseChina zifakazela ukukhuthazela, ukuzinzela nokubekezela. I-talisman fish carp yi-feng shui ngesimo sezithombe noma izithombe ezenza umuntu abe nokuvumelana nokuhlakanipha.
Yini esiza mascot?
UFeng Shui uthi uphawu lokuthuthukiswa okungokomoya, kanye nenhlanhla yisithombe se-carp (yizinhlanzi ezingcwele "Tai"). Kumele ngithi lo mculi unemisebenzi eminingi. Okokuqala, kuletha inhlanhla empilweni. Kodwa uma ubeka endaweni ephethe ingcebo (endlini eningizimu-ntshonalanga), uzovula ukugeleza kwemali.
Iziqu ezimbili ze-carp zisho idyll ephelele ebuhlotsheni phakathi kwendoda nowesifazane. Uma uhola "ekhaya" njengama-carp ayisishiyagalolunye, uqinisekisiwe futhi unenhlanhla, nokuchuma, nengcebo.
Njengoba uyazi manje, i-carp ayiyona inhlanhla nje kuphela, kodwa futhi ukuqina, amandla, ukukhuthazela, nenhloso. I-carp Live iphumelela kunoma imuphi umgomo, ngenkani ngenqobe ukubhekana nezinkinga ezihlangene endleleni yayo. Yingakho i-carp isadingeka kuqala kulabo abafisa ukufunda ukukhuthazela, babe nesibindi, bakhuthaze futhi banenjongo.
Njengoba izazi ze-feng shui zisho, kufaneleke ukuba nezindlu zomshubhu ophilayo. Kuyacaca ukuthi ezindlini zanamuhla akuzona njalo ezibonakalayo. Kulokhu, ungathenga isithombe nge-carp, uprinte isithombe sakhe noma wenze isithombe. Ngaphezu kwalokho, ungathatha indawo ye-carp ephilayo ngesitembu sakhe. Umbhalo ukhethe okuthandayo kakhulu.
Senza kusebenze i-talisman.
Ukuze wenze umsebenzi osebenzayo, kufanele ubekwe emanzini noma akude nawo. Okufanelekile, faka amanzi amancane (isibonelo, aquarium yokuhlobisa). Ingafakwa njengesitatimende, kanye nesithombe esibekiwe kahle noma isithombe sohlombe oludwetshiwe. Ngendlela, lokhu kuwukuphela kokuhluka kokubekwa kwe-mascot.
I-carp talisman ingaba ngezandla zonkulunkulu u-Eibisu (idonse inhlanhla nenjabulo). Uma i-carp iseduze nalesi sihlahla, ulethe ukuthula nokuvumelana endlini. Ngaphezu kwalokho, ku-feng shui kuyathandwa kakhulu nokho omunye umculi - umdala ongcwele waseTaosi ohlezi e-carp. Kukholelwa ukuthi lo mdala wayazi imfihlo yokuphila isikhathi eside. I-Carp, ewela ngaphansi kwethonya lendoda endala, yenza umuntu abe nentuthuko engokomoya, ukuhlakanipha, ikhono lokukhipha izakhi.
Uma kwenzeka ukuthi ufuna umsebenzi omusha noma ufuna nje ukwandisa imali engenayo, faka i-carp engxenyeni esenyakatho yendlu. Enye indlela ongayikwazi ukuyibeka ngayo emkhakheni ohambelana nenombolo yakho ye-Gua. Ungakhohlwa ukuthi ikhanda le-carp kufanele liqondiswe enkabeni yendlu. Kungcono nakakhulu, uma inhlanzi izocubungula ideskithophu yakho.
Ingabe ingane yakho inzima ukuhlolwa noma ukubhala inselelo enzima? Noma mhlawumbe isicingo esinzima kakhulu silindele wena? Kulesi simo, thatha indawo ye-carp enyakatho-ntshonalanga yendlu. Ngendlela, i-carp iyoba yinduna enhle kakhulu ehhovisi. Ochwepheshe be-Feng Shui batusa ngokuyinhloko kulabo abanobhizinisi labo elingenakuqondaniswa nokuncintisana. Faka i-mascot enyakatho yekhabhinethi noma kwideskithophu. Ikuvikela ekuncintiswaneni okubi.
Kuze kube manje, izitolo ze-Feng Shui zithengisa ama-pendants amaningi, izinhlamvu zemali nezinsimbi nge-carp. Uma unquma ukuthenga enye yalezi zindandatho, khetha inhlanzi yombala omnyama (omnyama noma ohlaza okwesibhakabhaka) noma nge-touch yensimbi. Lezi zindandatho zifanelekile kokubili ekhaya nasehhovisi.
Ngelinye ilanga indoda endala iQin-Gao, ehlezi ogwini lolwandle, yayibheka inhlanzi ehambayo. Ufuna ukuba ngaphesheya kwechibi. Ngeshwa, leli chibi lalibanzi kakhulu ukuze lingadluli. Wabe esecela zonke izinhlanzi zezinhlanzi ukuba zimsize. I-carp kuphela isabela esicelweni. Khona-ke uQin-Gao wahlala phansi emanzini, futhi bahamba ngomkhumbi. Le-carp yagijima kancane kancane, kodwa indoda endala ehlakaniphile yaqonda ukuthi umuntu akakwazi ukwenza isimangalo salowo ovuma ukusiza. Bahamba ngomkhumbi baya kolunye uhlangothi eminyakeni eyikhulu kamuva. Phakathi neminyaka, konke okusezweni kuye kwashintsha.
Njengoba u-Qin-Gao efuna ukwazi, wanquma ukudlula lonke elaseChina futhi azijwayele lezi zincwadi ezintsha. Ngemva kokufunda izinto eziningi ezintsha, umdala wanquma ukwabelana ngolwazi olusha nalabo abahlala ogwini lakhe. Wabuyela ogwini lolwandle, waphinde wabeka inhlanzi, futhi bahamba phambili. Indoda endala kanye ne-carp bahamba behamba iminyaka emakhulu. Izwe liguqukile futhi. U-Qin-Gao wathola nolwazi olusha futhi waphumela kolunye uhlangothi. Futhi futhi ukuwela kwaqhubeka iminyaka eyikhulu. Ngendlela, amaShayina akholelwa ukuthi i-sage isaqhubeka ibhukuda ngaphesheya kwechibi. Ngenxa yalesi sici, inkolelo yazalwa ukuthi i-carp ingahamba ngokuhamba kwesikhathi futhi ijwayele abantu ngokutholwa komdala.
I-Feng shui ne-mascot yamathambo.
Kukholelwa ukuthi i-feng shui talisman ngendlela ye-carp iyoba namandla kakhulu uma ifakwe ngemidwebo yendabuko yaseChina, ebizwa ngokuthi i-guohua.
I-Guohua - lokhu kuyi-inkinobho ekhethekile yokudweba noma amapayipi asekelwe emanzini. Le nqubo ikuvumela ukuthi udwebe kokubili ephepheni nasesilika. Izithombe ezidume kakhulu yizinyoni, izimbali, amanzi, izintaba futhi, impela, i-carp.
Inqubo ye guohua ukunakwa okukhethekile ikhokhelwe imininingwane encane. Yonke imininingwane encane kunazo zonke inenjongo yayo. Ukuze udwebe ngesitayela se-guohua, kufanele ubeke amasbredishini ayishumi nesithupha ahlukene. Kusukela endleleni isithombe sizobhalwa ngayo, ukukhetha kwalokhu noma ukushayela kuxhomeke. Ngaphezu kwalokho, ukushayela okufanayo kungenziwa ngezindlela ezihlukahlukene: kalula, ngokungathinti lutho, noma ngokucindezela okuqinile, okuqondile noma okuthambekele kancane.
Ngokuvamile, i-guohua ingumdwebo wasendulo waseChina. Ngokulandelayo, ubuciko baseYurophu buye lwaba nomthelela omkhulu ekuthuthukisweni kwayo. Kungenxa yakhe ukuthi abaculi bamaShayina bafunde ukusebenzisa umdlalo wamathunzi nokukhanya. Konke lokhu kwaholela eqinisweni lokuthi abahlaziyi bezobuciko, becabangela esinye seziqondiso zesitayela se-guohua, baqhathanisa ne-impressionism.
Ngakho-ke, uma unqume ukufaka isithombe se-guohua ekhaya, ngeke kukulethe injabulo kuphela yokuzicabangela ngokuhle, kodwa futhi kuyoba ukuhlanganisa okuhambisanayo kumascot wakho (i-carp). Isithombe sizovuselela umsebenzi we-mascot, okusho ukuthi i-carp izoletha ingcebo nenhlanhla endlini yakho.
Ubudlelwano bezinhlamvu zabantu kanye namanothi okubhala
Ifilosofi yobuhlobo bomuntu kuze kube yisikhathi
Imvubelo yezinwele: zokupheka ezingcono kakhulu zamaski ekhaya
Ngifuna izinwele ezinhle, ezinempilo
Indlela Yokufundisa Ukushintsha
Cottage ushizi casserole nge ithanga
Ukudala isithombe esivumelanisa ngezithunzi ezikhanyayo
Indlela yokususa zhirovikov: iseluleko semithi yendabuko
Ukuphindaphindiwe kanye nokubuthakathaka komsebenzi
Ikhekhe nge-rhubarb ku-multivark
Ingane yayibuthiwe yisitshalo esinobuthi